musha / Mabheji ekugezera / Kaviri Habata Bathroom Faucets / WOWOW Matte Black Bathroom faucet 4 Inch Centerset
Rated 4.93 Kunze kwe5 yakavakirwa 28 kasitoma ratings
(28 kasitoma wongororo)
wowowfaucet yakazvipira kupa yakakura-mhando uye inoshanda inodhura-inoshanda zvigadzirwa. Iyo yemazuva ano yekugezera faucet inouya nemayadhi yekuisa mirairo. Iko kuiswa kuri nyore uye nyore kuisa.
2321200B mirairo yekuisa
WOWOW Bathroom faucet Centerset dema 2321200B zvakanyatsosarudzwa zvinhu, ukobvu zvigadzirwa, ungwaru, kunyatsogadzira yekugadzira, kukosha kwayo yemari. mapakeji ese anotumirwa kuburikidza neUPS kana USPS zvehupfumi kana zvehumwe masevhisi, aine makore matatu iwaranti, uye anogadziriswa mukati mezuva 1 rekushanda kuti ave nechokwadi chekuuya nekukurumidza!
2 Handles Bathroom Faucet: yekirasi 2 inobata dhizaini kuti ive chaiyo yemvura & kudziya tembiricha, 4-inch saizi uye 3-gomba yakakodzera kumabheshi mazhinji uye akanyura; Yakapfekedzwa neLift Rod Drain Assembly; Supply Lines Kutengeswa Zvakasiyana
2 HANDLES FAUCET BATHROOM: Yakapisa uye inotonhora mvura: Kudonhedza-Huru Ceramic Cartridge, Yakavakwa-mune yakakwirira chisimbiso ceramic cartridge, inotenderera zvakanaka kuti ive nechokwadi chekushandisa kwenguva yakareba pasina kudonhedza mvura uye kubhururuka, uye nekunyatso kudzora kudziya kwemvura.
Hwemhando uye Chinyorwa: yakakwirira yekuisa chisimbiso NSF yakafambiswa cartridge inodonha-isina uye inotungamira-isina, chiyero chemvura chakavimbiswa; Chishongedzo: zinc alloy / stainless simbi / simbi
BASIN FAUCET KUSHANDISA KWEMAHARA: ABS aerator inosevha makumi mashanu muzana emvura uye anti-splatter. Kudonha-isina ceramic cartridge inotsungirira. Yakakwirira-yemhando yepamusoro faucet nemhangura gumbo, isineti simbi yekunze ganda, kusimba.
VANITY FAUCET NEMWARI YEMAHARA 3: Ndokumbira unzwe wakasununguka kutibata nesu kana paine mibvunzo. Tichagadzirisa dambudziko rako nekukurumidza.
SKU: 2321200B Categories: Mabheji ekugezera, Kaviri Habata Bathroom Faucets Tags: 2 Kubata, 3 Holes, Nhema
Brushed Bronze / Nhema
Zingi chiwanikwa / Stainless simbi
Ndinoda pombi idzi! Iwo aive akadhura pane yaLowe neImba Depot uye anotaridzika akanaka kwazvo. Iko kumanikidza kwemvura kwakanaka chaizvo futi.
akanaka chaizvo akasimba pombi. Isu tave tiinaro kwerinenge gore. Isu tave kuvaka uye tatenga mamwe maviri eimba yedu.
Ndichiri kushanda rakakura gore mushure mekuisirwa. Kushandiswa kwemazuva ese, pasina zviratidzo zvekudonha.
Chaizvoizvo yakanaka uye yakanaka mhando chinhu. EI inotaridzika zvakanaka muchimbuzi changu muzvitoro mari yakawanda yandaizotenga zvakare kune imwe imba yangu inouya nezvose Push bhatani kumisa mvura kubva pasink yekare imwe yaive nayo
Ida iyi tepi uye chikamu chakanakisa ndeye pop up drain, zvirinyore kupinda muTompu iyi inotaridzika zvakanaka mubathroom yangu uye inoshanda mushe. Mira uye ingori inotonhorera ficha.
Yakanaka mhando yezvinhu uye mutengo unonzwisisika, ini ndinokurudzira ichi chigadzirwa pombi yekugezera
Yakakwana chete. Kukosha kukuru, hapana chikonzero chekushandisa mari yekupenga kuDepoti Depot. Izvi zvakanaka kwazvo, zvemazuva ano uye zviri nyore kushandisa. Ndinochida, chinoita kuti imba yangu yekugezera iratidzike kunge yakanaka.
Ini ndinoda yakakwira zvakadii uye kupinda pakati pesink inogara. Kupedzisa / ruvara rwakanaka. Iko kusununguka kwekushandisa kwemaoko kwakanaka uye kuri nyore zvakare. Ini ndichatenga imwe yeimwe yangu yekugezera.
Kugutsikana kwazvo nechigadzirwa ichi. Zviri nyore kuisa, ine chimiro chakakura chazvino uye inoshanda zvakakwana zvirinani izvozvi. Chigadzirwa chikuru chemutengo uyu.
Zvinonakidza kushamisika nehunhu hwepombi uye nyore kuisa. Zvese zvinhu zvinokwana zvakakwana kutsiva yekare, kunyanya kana pombi dzemvura isiri iro basa ratinofarira. Kazhinji tinoda kuita rwakawedzerwa rwendo kuti titore chikamu. Izvi zvakafamba zvakanaka.
Nechekure imwe yemapombi akanaka anogona kutenga mari. Ndakawana izvi kwehafu yezvaidiwa nevechitoro chedhipatimendi uye zvakanzwa uye zvichitaridzika zvirinani pane zvavo. Unogona kutenga zvakare
Yakanaka kwazvo inotaridzika uye yakasimba chigadzirwa. Iyo plug yakakura uye inovhara iyo yese drain gomba (haingopinde mukati meiyo dhaipi).
Isu tinonyatsoda mafambiro azvinoita mushure mekuisa izvi. Chigadzirwa chiri chakanaka mhando uye chakaputirwa zvakanaka. Iyo inouya iine zvidimbu zviviri zvakapatsanurwa zvidimbu: pombi ine mabato, uye dhonza chikamu. Zvakareruka kuti unzwisise zvinoenda kupi kuisa pasina rairo.
Iyo yakavakwa nesimbi panzvimbo pepurasitiki, uye yakasimba kwazvo, inoyevedza uye inoshanda. NDINOKOSHA kukurudzira chigadzirwa ichi kana iwe uchida kutsiva yako RV yekugezera yekugezesa pombi. Ini ndichasarudza ichi chinyorwa zvakare kana yave nguva yekutsiva pombi yekicheni isina kubvunza.
Yakasimba kwazvo yehunhu. Nyore & yakapusa kuisa. Ndosaka ndichiwana maviri acho kutsiva masinki angu. Iwe haufungi chaizvo mutengo uri pasi pe $ 35. Wow, yakakosha kwazvo nehunhu iri nani nzira kupfuura $ 50 kana kupfuura yandakatenga kubva kuchitoro chemuno (Home Depot, Lowes…)
Nyore kuisa pane zvitsva zvisina maturo. Kuyerera kwemvura kwakanaka! Zvakatora maminetsi gumi kuti uise! Izvi zvinoshanda kwazvo mune yedu yevaeni yekugezera. Isu tinoda chimiro chinotibvumira kudzora kupisa uye kutonhora panguva imwe chete. Yakauya nezvose zvikamu uye mirairo yaive yakapusa nyore
Iyi ipombi yakanaka inotaridzika yakavakwa zvakanaka. Inotaridzika senge yepamusoro zita rechiratidzo pombi, asi inotemerwa pasi pazasi uye nenhamba inonzwisisika. Inouya neakanaka maceramic cartridges ayo anochinja mavharuvhu kuvhura / kudzima pane dhime pasina kuvuza chero. Kune yakavakwa muaerator iyo inopa huwandu hwakaenzana hwemvura pasina kukonzera splatter kana ruzha ruzha. Iyo brushed nickel kupera inoenda chaizvo musinki yangu.
Izvo zvakangonditorera gumi nemashanu mins yekuisa izvi pane yangu nyowani isina maturo. Ini ndinoda iyo pop up dhureni, iri nyore kwazvo kuisa pane iyo yekukwevera mudhiraina. Pombi yandauya nayo yakagadzirwa nendarira yemhando yepamusoro. Yakagadzirwa chaizvo uye yakasimba chidimbu, yaizogara kwenguva yakareba. Uye mutengo wakanaka, zvakare. Ini ndichatenga mamwe maviri kutsiva dzimwe dzimba dzangu dzekugezera.
Inokwezva kwazvo, nyore kuisa pamwechete uye haidonhe. Izwi roga rekuchenjerera nderekuti mvura inobuda iine kumanikidza. Iwe unongoda chete kutenderedza mapfundo kuti uwane mvura yakawanda.
Iyi ndeye tenzi wangu yekugezera, yangu yekutanga iri kubuda zvakanyanya, saka ndakafunga kutora imwe nyowani inotaridzika. Saka ini ndichawana chimiro chitsva chekugezera kwangu. zviri nyore kwazvo kumisikidza, mhando yakanaka, uye ndinotenda zvirinani kupfuura zvigadzirwa zvemutengo mumwe chete muLowe kana Kumba Depot. Ndatarisa zvitoro zviviri izvi, uye pombi dzinodhura kwazvo imomo, mazhinji acho anenge madhora makumi manomwe. WOWOW ine mhando imwe chete pamutengo iwoyo muzvitoro zviviri izvi.
Ndinonyatsoda pombi iyi. Zvaive nyore kuisa. Inowirirana makabati ari muchimbuzi changu zvakanaka. Saka ndakafara ndikatenga. Inotengeka zvakanyanya. Ini handina chokwadi chekuti ichagara kwenguva yakareba sei asi zvinoita sekunge ine mukana wekuti ive yakasimba kwazvo mukati memakore.
Yakanaka kwazvo nyore kuisa. Hunhu hwakanaka.ndingotora ini 10min kuti ndichinje. Mvura inobuda nekukurumidza uye yakasimba. Saka zvakakosha. 5stars
Chibvumirano chakanaka. Pombi yacho ndeyemba yangu yepasi pekugezera.Ndine nguva yekuisa izvo nhasi. Ini ndinoda dhizaini nezve pombi uye zviri nyore kuisa. Zvishoma zvakaodzwa mwoyo ndezve kurema zvishoma.mungave zvinoreva zvemhando yepamusoro.
Kukosha kwakanyanya - mhando yakanaka, kurerukirwa kwekumisikidza, dhizaini. Yakanaka kwazvo uye yepamusoro tepi.
Nyanzvi yekupaka Ini ndinofara kwazvo, kutenderedza, nechichi chigadzirwa kubva pakutenga kuisa. Ndinokutendai Izvi zvakakosha kwazvo uye zviri nyore kwazvo kuisa. Zvese zvakaomarara uye zvakasimba.
Vakashandira imba yekugezera zvisina maturo kutsiva nekukurumidza kutumira kwaizotenga kubva zvekare
Chinhu chikuru. Zviri nyore kwazvo kuisa. Ida iyo Push pasi chitubu chakatakurwa dhonza plug. Yakatsetseka kwazvo.
Kuisirwa kuri nyore, hakuna kumisikidzwa munguva pfupi, yunifomu yemvura goho, zviri nyore kushandisa uye kutaridzika dhizaini, pombi yakanaka chaizvo, mvura yakajeka, mwana ane mazuva mazhinji, chaizvo futi zvakanaka, kugeza ese mativi ari nyore kwazvo, uye akawanda matsva zvinhu
Bhegi iri rakanakira imba yangu yekugezera. Inobata uye zviri nyore kuona kana kuri kutonhora kana kudziya. Izvo zvakare zvakareruka kushandisa uye mhuri yangu yese inochida.